Taageerayasha Arsenal Way Ku Farxayaan Waxa Uu Sameeyay Renato Sanches – Garsoore Sports
Taageerayasha Arsenal Way…
Taageerayasha Arsenal Way Ku Farxayaan Waxa Uu Sameeyay Renato Sanches
Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta waxa uu isku diyaarinayaa xagaa mashquul ah oo uu ku qaadan doonno soo xerogelinta cayaartooy cusub si uu kooxdiisa u xoojiyo ololaha xiga.
Arteta, oo la shaqeynaya aggaasimaha farsamada kooxda ee Edu, ayaa hami ka qaba inuu ugu yaraan shan waji cusub ku daro kooxdiisa xagaagan, sida ay qortay football.london bishii lasoo dhaafay.
Arsenal waxay xiiso u muujisay daafaca dhexe ee kooxda Brighton Ben White,kaasoo qarka u saaran inuu ugu biiro heshiis 50 milyan oo ginni ah, Gunners ayaa sidoo kale kusii dhowaaneysa saxiixa daafaca biddix ee kooxda Benfica Nuno Tavares iyo cayaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Anderlecht Albert Sambi Lokongo.
Laakiin xitaa haddii ay Gunners si guul leh heshiisyo uga hesho White, Tavares iyo Lokonga, qorshahooda xagaaga lama filayo inuu halkaas ku dhammaado, maadaama Arteta uu doonayo inuu tayo dheeraad ah ku daro safkiisa.
Hal ciyaaryahan oo si dhow loola xiriirinayay inuu u wareegayo Emirates Stadium maalmihii la soo dhaafay waa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille iyo Portugal Renato Sanches.
Dhammaadkii isbuucii lasoo dhaafay, warbixinno ay qoreen warbaahinta caalamka ah oo aan idinla wadaagnay ayaa lagu sheegay in Gunners ay weydiisatay in Lille ay ‘la socodsiiso’ xaaladda ku saabsan mustaqbalka Sanches, taasoo soo jeedineysa inay aad u xiiseynayaan inay xiddigii hore ee Bayern Munich usoo jiitaan Emirates xagaagan.
Sanches ayaa kaliya ku biiray Lille sannadkii 2019, laakiin waa uu ku riyaaqay waqtigiisa kooxda Ligue 1ka, taasoo keentay xiisaha ka imaanaya kooxaha kale.
Haatan, markii ugu horreysay tan iyo markii ay soo baxeen wararka la xiriirinaya laacibka reer Portugal inuu u dhaqaaqo Waqooyiga London, Sanches ayaa ka hadlay wararka la isla dhexmarayo – laakiin ma’ahan qaab ay inta badan ciyaartooydu sameeyaan marka wax laga weydiinayo mustaqbalkooda.
23 jirkaan ayaa si dadban uga hadlay wararkan la xiriirinaya Gunners,isagoo wadahadal bartiisa Instagramka kula yeeshay daafaca Arsenal Gabriel Magalhaes.
Arrinta xiisaha leh ayaa ah in Gabriel oo xagaagii hore kusoo biiray Gunners uu farriin u diray Sanches oo uu ku yidhi “kaalay Arsenal”.
Sanches ayaa markaa kaddib ku jawaabtay farriin shan erey ah oo u eg qarsoodi: “Waxaan ahay [waan] sugi doonaa martiqaadkaaga.”
Taasi, dabcan, shaki kuma jiro inay ku sababi doonto taageerayaasha Gunners inay fekeraan, gaar ahaan markii Gabriel iyo Sanches ay kasoo wada ciyaareen Lille. Gabriel miyuu isku dayi donnaaa inuu Sanches usoo wareejiyo Waqooyiga London? Miyuu ogyahay wax aynaan ogeyn? Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona.
Jamaica Oo Dooneysa Inay Wiilkooda Greenwood Kasoo Wareejiso Xulka Ingiriiska
Manchester United Oo U Dhaqaaqaysa Saxiixa Leon Goretzka